Fahazarana tsara Lire la suite ... rosia Fanafody voajanahary Firaisana sy fifandraisana care
Any Brezila dia misy hatsaran-tarehy any amin'ny faritra be tanàna - Video
Hatramin'izao, ireo maodely ambony Breziliana dia matetika avy amin'ny mpiara-monina ambony na avy amin'ny fiaviana manana tombontsoa. Saingy, ho an'ireo izay avy amin'ny faritra be tanàna dia sarotra ny miditra amin'ny lampihazo. Ireo mpihaza modely dia tsy mitrandraka ...
Miss France 2021: Justine Dubois, voafidy Miss Miss Poitou-Charentes!
ALEXIS WAYAN Aogositra 31, 2020 0
Sary. Ity sabotsy 29 aogositra ity dia voafidy ho Miss Poitou-Charentes 2020 i Justine Dubois 24. Ny volana desambra ho avy izao dia hisolo tena ny faritra misy azy ny tovovavy XNUMX taona amin'ny fifaninanam-pirenena amin'ny fanantenana hahazo ny satroboninahitr'i Miss France. Izany ...
Miss France 2020: mpifaninana iray nesorina, satria nanao ny ady teo amin'ny tratran'ny homamiadana
Chinde Aogositra 25, 2020 0
Mandra-pahatonga ny filaminana vaovao, ny fifaninanana dia tsy mamela sary miboridana, na dia amin'ny antony tsara indrindra aza. Hoy i Anaëlle Guimbi: "Mbola hiaro hatrany ny soatoaviko aho." Ity modely tanora ity, kandida ho ...
5 toro-hevitra hanatsarana tsara ny bozonao
fomba tsy azo atoriana, azo ianarana. Nifidy torohevitra 5 ho anao izahay mba hanatsarana ny làlanao sy manasongadina izay rehetra mahita anao mandalo. Raha tsy misy tohiny fanampiny, andao atombohy amin'ny tendro voalohany: # Stop…
Kameroney Imane Ayissi no mpamorona voalohany ao amin'ny Sub-Saharan Africa izay nanao diabe ho an'ny herinandro ...
Chinde Aogositra 12, 2020 0
Niorina tao Paris nandritra ny telopolo taona, ny Kameroney Imane Ayissi dia nanao tantaram-pitiavana tamin'ny 23 Janoary tamin'ny alàlan'ny ho lasa mpamorona voalohany avy any Afrika atsimon'i Sahara hiatrika ny herinandro H Paris Cauteure Paris. Teraka ...
Ny volon-doko afrikanina novolavolain'ny ANGE EKA
Fantatra amin'ny herin'ny famoronana sy ny fisainany, ny mpanakanto dia matetika mamaritra azy ho toy ny sary tsy misy dikany sy manaitaitra azy. Ary rehefa nametaka azy tsara izy, dia nanapa-kevitra ny hanao volo, izay tadiaviny. Anjely EKA, ...
5 mpamorona lamaody tokony harahinao tanteraka
bryanekobe Aogositra 12, 2020 0
Mpandrafitra lamaody 5 izay tokony harahinao tanteraka dia izahay no nifidy ny mpamorona lamaody 5 izay tsy maintsy arahanao tanteraka fa manana endrika lamaody amin'ity fahavaratra ity. Samy manana ny filan'ny fiainana daholo isika rehetra! Ny sasany dia mpankafy ny ...